ओली-प्रचण्डबीच बैठक चलिरहेका बेला एकाएक खुमलटार पुगे वामदेव, के बिषयमा हुँदैछ कुराकानी ? — Sanchar Kendra
ओली-प्रचण्डबीच बैठक चलिरहेका बेला एकाएक खुमलटार पुगे वामदेव, के बिषयमा हुँदैछ कुराकानी ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको वार्तामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका छन् । शनिबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यी ओली प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए ।
ओली खुमलटार पुगेको केहीसमय पछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका छन् । अहिले तीन नेताबीच खुमलटारमा छलफल चलिरहेको छ । पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय गौतम दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा सहभागी हुन पुगेको विषयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३ बर्षपछि खुमलटार पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री खुमलटार जाने भएपछि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था शनिबार बिहानैबाट कडा पारिएको थियो । ओली यसअघि २०७४ सालमा खुमलटार गएका थिए ।
यसअघि हिजै मात्रै प्रचण्ड–नेपाल समूहले पेरिसडाँडामा प्रदेश एकका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको भेला आयोजना गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक ओली प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निवास गएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले शुक्रबार जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिसडाँडामा प्रदेश १ का आफूनिकट जिल्ला अध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरी संगठित विरोधमा उत्रिन निर्देश गरेका थिए ।
कोटेश्वर भेलापछि प्रचण्डले साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा पछिल्लो पटक नेकपाभित्र विवाद छ ।
यसअघि बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले मङ्गलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा सङ्घीय संसद्को विशेष अधिवेशनको माग राखेर पार्टीका सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष दिएको आवेदन दुवै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । नेकपा स्थायी कमिटीको अर्को बैठक भोलि बस्नेछ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस १० मा बस्नेछ ।